Omni စျေး - အွန်လိုင်း OMNI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Omni (OMNI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Omni (OMNI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Omni ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 000 682.00
volume_24h_usd: $55 756.20
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Omni တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Omni များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OmniOMNI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.76OmniOMNI သို့ ယူရိုEUR€1.48OmniOMNI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.34OmniOMNI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.6OmniOMNI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr15.77OmniOMNI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.11.02OmniOMNI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč38.96OmniOMNI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.54OmniOMNI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.34OmniOMNI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.43OmniOMNI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$39.39OmniOMNI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$13.62OmniOMNI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$9.37OmniOMNI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹131.62OmniOMNI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.296.36OmniOMNI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.41OmniOMNI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.63OmniOMNI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿54.59OmniOMNI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥12.22OmniOMNI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥185.49OmniOMNI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2080.76OmniOMNI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦665.96OmniOMNI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽128.79OmniOMNI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴48.69
OmniOMNI သို့ BitcoinBTC0.000149 OmniOMNI သို့ EthereumETH0.00445 OmniOMNI သို့ LitecoinLTC0.0296 OmniOMNI သို့ DigitalCashDASH0.0175 OmniOMNI သို့ MoneroXMR0.0186 OmniOMNI သို့ NxtNXT125.2 OmniOMNI သို့ Ethereum ClassicETC0.246 OmniOMNI သို့ DogecoinDOGE491.79 OmniOMNI သို့ ZCashZEC0.0185 OmniOMNI သို့ BitsharesBTS67.72 OmniOMNI သို့ DigiByteDGB63.52 OmniOMNI သို့ RippleXRP5.77 OmniOMNI သို့ BitcoinDarkBTCD0.0593 OmniOMNI သို့ PeerCoinPPC6.13 OmniOMNI သို့ CraigsCoinCRAIG784.15 OmniOMNI သို့ BitstakeXBS73.4 OmniOMNI သို့ PayCoinXPY30.03 OmniOMNI သို့ ProsperCoinPRC215.92 OmniOMNI သို့ YbCoinYBC0.000925 OmniOMNI သို့ DarkKushDANK551.82 OmniOMNI သို့ GiveCoinGIVE3724.92 OmniOMNI သို့ KoboCoinKOBO385.89 OmniOMNI သို့ DarkTokenDT1.62 OmniOMNI သို့ CETUS CoinCETI4966.3